I-X-FILES NEWBIE RECAP: IXESHA LESI-8 - UMNIKELI
Abaphindezeli Beziko Lemfundo
I-X-Files Newbie Recap: Ixesha lesi-8
Imibuliso, X-Philes! Sikwixesha lokuphela komboniso, kwaye ukuba ndinyanisekile, le yayiyinto enzima. Inzima kakhulu. Uninzi lweli xesha lonyaka luzive ngathi kukungxamela ukukhangela iidayimani. Kwakukho umsebenzi omninzi womlinganiswa, kubandakanya ezimbini ezitsha nezikrelekrele ngohlobo lukaMonica Reyes noJohn Doggett, kodwa inkunkuma eninzi. Inkosi emnandi, inkunkuma eninzi. Ndiyazi ukuba kunzima ukugcina umfutho emva kweminyaka esibhozo nakwimovie enye, kodwa ababhali bebetsala amazinyo ngale nto.
Ngaphandle kokuqhubeka, masingene! Ndijongisa ifomathi ye-mytharc / ye-Monster-ye-veki kule nyanga kuba i-mytharc (ngokunyanzeliswa) yayixhasa ixesha elininzi lonyaka. Kananjalo, ndiza kuphinda ndiphinde iziganeko eziphambili zeentsomi kuqala emva koko nditshone kuphuhliso lwabalinganiswa. Kuya kubakho icandelo elahlukileyo lePer Manum kunye nokubonakaliswa kwayo okungathandabuzekiyo kokukhulelwa.
Iziqendu: Ngaphakathi, Ngaphandle, Oku akwenzeki, Ukubulala, amagama amathathu, Vienen, Essence, Ubukho
Njengoko sibonile ekupheleni kwe-S7, uMulder uye wanyamalala. Iqela elisekwe ukuba limkhangele, kunye noMmeli uJohn Doggett, owayesakuba yi-NYPD kunye ne-USMC, ukuze ayilawule. U-Scully kunye no-Skinner bayabandakanyeka kukhangelo kodwa, bethathela ingqalelo ukuba bayayazi into eyenzekileyo ku-Mulder, nabo baqhuba uphando lwabo ecaleni ngoncedo lweLone Gunmen. Bajonge iingxelo zomsebenzi weUFO. Kungekudala emva kokuba kusekwe iqela lomsebenzi, ubungqina obuthile buye balahleka ekutshixweni. Isela lisebenzisa ikhadi elibalulekileyo lika-Mulder, iiarhente ezikhokelayo ukukrokrela ukuba ngandlel 'ithile ufakile ukufa kwakhe. Ngokukhawuleza uScully ufumanisa ukuba ubungqina obulahlekileyo buphathelene neGibson Praise. Umntu ushenxisa ifayile phantsi komnyango kaDoggett kwaye amlumkise kwinto enye. UGibson kwisikolo sabangevayo eArizona. Ukufika kwabo apho, umntu sele emthathile. I-Doggett ibalandela kwi-cliff kwaye ifumanisa ukuba yi-Mulder, okanye ubuncinci umntu ofana naye. Ukhulula uGibson, kodwa emva koko uhambe kwiinyanga aze abhubhe.
Ngaphandle, u-Scully uyala ukuba lo mfo uzibiza njengo-Mulder wayengumzingeli ocebileyo onesisa sokubumba. Balandela uGibson kuba ubungqina obuphilayo bobukho babaphambukeli. Uxelela u-Doggett kwaye yena, ngokumangalisayo, akaphazanyiswa kwinqanaba lomphambukeli kwaye ubuza nje ukuba yintoni le bounty's. I-shapeshifter izenza amalungu ophando, isenza ukuba kube nzima ukumlandela. U-Scully ufumana uGibson kwindawo efihlakeleyo entlango kwaye uthunyelwe esibhedlele. Nangona kunjalo, umzingeli oyintabalala-ezenza kuqala njengoScully aze emva koko abe ngomnye weearhente zeDoggett-uyayilandela. Uhlasela i-Skinner kwaye uphantse abaleke noGibson, kodwa uScully uyabafumana kanye ngexesha. Umzingeli onesisa uye wamhlasela kodwa uDoggett, kwibhola njengakuqala, umbuyisile kwaye umbulale. Ekugqibeleni, i-Doggett izama ukucacisa yonke into kuMlawuli uKersh kwaye iphele inikwe ii-X-Files kwaye iyalelwe ukuba ifumane iimpendulo. Nako sisiya kwakhona!
Emva kwesiqalo esineziqwengana, uScully noDoggett benza ubudlelwane obusondeleyo kwaye baqhubeke nokusombulula iiFayile zeX ngelixa bejonge uMulder. Akaveli kwakhona de kube sembindini wexesha, kule Ayenzeki. Inani labathumbe ababengabaphambukeli babuyiselwa kwindawo ekude eMontana. UJeremiah Smith, okokugqibela ukubonwa eTalitha Cumi naseHerrenvolk, kubonakala ngathi uhlala nehlelo elikholelwa ukuba abaphambukeli sele bezokungenisa kwi-apocalypse. Uphilisa abo babanjiweyo, bonke bonzakele kakhulu emva kovavanyo lwangaphandle. Scully noDoggett bayaziswa malunga nababanjiweyo ababuyileyo kwaye, ngethemba lokukhokela kwi-Mulder, entloko ukuya kuphando. UDoggett ufikelela kuMmeli uMonica Reyes ngoncedo. Aba babini basebenze kunye ngaphambili emva kokubulawa konyana kaDoggett. UReyes ugxile ekubulaweni ngokwesiko kwaye ngoyena mntu uthandekayo, okonwabisayo emhlabeni. Uyabanceda ukulandela umkhondo wehlelo. U-Scully uyamqonda uSmith emva kokuba ebone umntu esenza uhlengahlengiso kwividiyo yamalungu. Udliwanondlebe naye ngelixa iiarhente zijonga ehlathini, ekugqibeleni zifumana okubonakala ngathi ngumzimba kaMulder. I-Scully panics emva kokumbona kunye nokubaleka abuyele kwikhompiyutha kaSmith. Nangona kunjalo, ubugcisa basemzini buvela esibhakabhakeni kwaye buyamphakamisela phezulu, bumshiye ukuba awe phantsi kwaye akhwaze, ngokungathandabuzekiyo, oku akwenzeki.
Akunjalo, ewe, 'cuz Mulder akafanga ngokupheleleyo. Bayamngcwaba kodwa ulungile.
Kwi-Deadalive, uBilly Miles ukhutshiwe emanzini kunxweme laseNorth Carolina. Ngaphandle kokubonakala kokungunda nokungabikho kweempawu ezibonakalayo zobomi, ujika aphile. I-Skinner ichithwe ngokwaneleyo ukuba imbe i-Mulder. Naye uyaphila, nangona ebengcwatyiwe iinyanga ezintathu. I-fracas ngokubanzi iyalandela njengoko wonke umntu ezama ukufumanisa ukuba yintoni i-eff eyenzekayo. UBilly uyaphakama, ahlambe isikhumba sakhe esibolileyo esibolileyo kwaye ajike abe yindoda entsha phantsi. Umntu omtsha kraca-ungumphambukeli ngoku. Scully, owayemtyelele esibhedlele kwaye wabona ukubetha kwentliziyo ezimbini esweni, uqala ukubeka ezimbini nezimbini kunye. Disney iNkosana u-Alex Krycek ubonakalisa kwaye ufuna ukuba uSkinner abulale umntwana ongazalwanga kaScully ukuze afumane isitofu sokugonya uMulder. Iqhawe lethu eliwileyo liphethe intsholongwane, uyachaza uAlex, kwaye uyakuguquka abe ngumphambukeli ngaphandle kokuba ufumana iyeza lokugonya. I-Skinner iyavuma ngokucacileyo ukubulala i-Scully cub kwaye endaweni yoko izama ukuvala inkxaso yobomi buka-Mulder. UDoggett, obesoloko ethetha nelinye lamalungu enkolo malunga nokuxhwilwa kwabangaphandle, uhamba kule nto, emva koko waleqa uAlex kwigaraji yokupaka. Umboniso omangalisayo ulandela. UAlex utshayisa ibhotile engenayo isitofu sokugonya, kuba kutheni isidenge siphulukana nekhadi laso ekuphela kwaso? Ngaphandle koko, wanika uMulder iyeza lokugonya ngelixa wayephunga kwigumbi lakhe ngaphambili. I-Mulder ikhawuleziselwe kwi-OR kodwa ibonakala ilungile. U-Scully ucacisa ku-Doggett ukuba inkxaso yobomi yayiqinisa intsholongwane, kodwa kubonakala ngathi uzinzile ngoku. U-Mulder uvuka kamva afumane uScully ecaleni kwebhedi yakhe. I-OTP yethu iphinda ihlangane kwindawo eyoyikisayo yokubulala.
Ngamazwi amathathu, siphinde saziswa ku-Knowle Rohrer, umhlobo wakudala ka-Doggett osebenzela ubukrelekrele kwezomkhosi. Ndiqinisekile ukuba igama lakhe nguNoel, kodwa nokuba yintoni. UAdam Baldwin udlala lo mfo kwaye kusoloko kumangalisa ukubona uAdam Baldwin ukuba kuphela kwimizuzwana ye-1.5 kuthatha ukuba ndikhumbule ukuba uyisikrelemnqa. Ngapha koko, utyibilikisa iDoggett ngolwazi oluthile kwaye ubonakala emhle kakhulu de sibone i-chip yasemzini entanyeni yakhe kwaye siqonde ukuba luhlobo oluthile lwesityalo.
IVienen, iDoggett kunye neMulder babanjiswa kumatshini weoyile. Ubudlelwane babo bokusebenza buye kwaye buqhubeka ukuba nzima kakhulu. U-Mulder ubuyile engcwabeni ephethe imeko ye-impromptu ye-assholery egqithileyo, kwaye wamphatha kakubi u-Doggett ngaphandle kwesizathu. Uyanyanzelisa ukuba abuyele kwii-X-Files kodwa endaweni yokuba asebenze no-Doggett ukuze aphakame ngokukhawuleza, wenza yonke indawo kwaye ukhohlakele kwaye uyichitha ngokupheleleyo yonke into ayenzileyo. Oku ngaphandle kokuqinisekiswa kukaScully ukuba uDoggett yindoda elungileyo (eyona ndoda, kwaye uMulder ufanelwe lolo donga ngendlela enza ngayo) kwaye iluncedo olukhulu kuye. I-Vienen yayi-ndicinga ukuba ikhulelwe ukuze bakwazi ukufumana indlela yokusebenzisana kunye nokuhloniphana, kodwa akukho nanye eyayiza kuba yimfuneko ukuba uMulder engazange aguquke ngokungenasidingo xa ebuya kwabafileyo. Idrama engenantsingiselo kunye nokubhala okuhle zizangqa ezibini, ababhali! Akukho mzobo kaVenn apha. Ngapha koko, abasebenzi beoyile kule ndawo bonke bosulelwe yintsholongwane yeoyile emnyama. Ikhadi lokuposa elivela kwiintsuku ezindala. Konke oko kukuthi, ngaphandle kwabasebenzi bemveli baseMexico abanokuzikhusela kwimfuza. Bahlengahlengisa ii-rig's comms ukunqanda abasebenzi ukubaleka, bekholelwa ukuba abaphambukeli bayeza kubo. Abasebenzi abosulelekileyo emva koko baqala ukuhlasela i-Mulder kunye ne-Doggett kwaye baqhubeke nokuqhushumba yonke i-rig, ngamagorha ethu awela iinkwenkwezi asinda cebetshu. UMulder ugxothwe ixesha lama-400.
Okokugqibela, sifumana isiphelo samaxesha amabini, i-Essence kunye nokuBakho. Ngaba i-Scully cub ifika kwaye abaphambukeli banoluhlobo lokuthintela? Kancinci kuyo yonke indawo, kodwa ukudubula kokugqibela kwesizini kuyenzela yona. UDana uthathe ikhefu lokuya kubeleka kwaye umama wakhe wamphosela ishawa. Uhamba nomongikazi ogama linguLizzy ukumnceda ukuba alungiselele ukufika kwethole. U-Lizzy, ewe, ayisiyiyo yonke into ayibonayo. KwiPer Manum, endiza kubhala ngokwahlukeneyo kuyo, safunda ukuba ugqirha obelethisa uScully wayebandakanyeka kwinkampani ebizwa ngokuba yiZeus Laboratories. Le nkampani ibonakala ngathi ilinga abantu ababhinqileyo ngokubafaka kubantwana basemzini. Ilebhu yenkampani iyatshisa e-Essence, emva kokuba umphambukeli uBilly Miles ebulele omnye woogqirha wayitshisa indawo. UDoggett noMulder baphanda kwaye bafumanise amakhonkco enkampani kulowo wayesele ebelekisa uScully, uGqirha Parenti, ngelixa uScully ngokwakhe efumanisa ukuba uLizzy uphakamile. U-Lizzy utyhila ukuba inkampani izama ukwenza ii-clones zisebenzisa i-DNA yangaphandle kwiRoswell. Umntwana kaScully, uthi, ukhetheke kakhulu-ngumntu kodwa akabonakalisi buthathaka ebantwini. UAlex uyavela kwakhona ukuqinisekisa okungako kwaye athi umntwana ubeka isoyikiso kubaphambukeli. U-Mulder kunye no-Doggett bacela uReyes ukuba afumane iScully kwindawo ethile ekhuselekileyo ukuze abelethe. UBilly ubahlasela kwi-FBI HQ, kodwa ngoncedo luka-Alex ngokwakhe (akukho ngaphantsi) uScully noReyes babaleka. U-Billy kuthiwa uxutywe kwilori yenkunkuma kodwa ngokuqinisekileyo akafanga.
Kukho, uguquko lukaBilly njengeTerminator (le kuphela kwayo Isiphelo ireferensi ndiza kuyenza, ndiyathembisa) kwaye ndiyaqhubeka nokufuna iScully. Uhlasela uAlex no-Skinner kwaye ubeka isibhedlele esibhedlele. UAlex konke kodwa ushiya i-Skinner ukuba ifile xa ebona uBilly, eyi-tailing ephezulu ekuphakamiseni kwelona phawu lungabinazintloni ze-zero fucks endakha ndazibona. UDoggett utyelelwa nguKnowle, oxelela uBilly iziphumo zovavanyo lweMfazwe ebandayo yokwenza i-supersoldier. Isichotho Hydra nayo yonke loo nto. Umntwana kaScully, utsho, umphumo wokuqala wezinto eziphilayo zovavanyo endicinga ukuba zinokuthetha ukuba uzala uBucky. UDoggett uhlaziya uMulder koku esibhedlele. Emva kwexesha, ubona uKnowle edibana noMlawuli uKersh kunye nenye iarhente, uCranane. I-Crane sisityalo esingaqhelekanga. Ukhathazeke ngokwaneleyo ngoku, uDoggett ubiza uMulder kwaye sele eza kumxelela ukuba uScully uphi xa uAlex ehlasela uMulder. Ngaphandle kwesizathu. Uphethe umpu ku-Mulder kwaye uya kwisibongo esimalunga nendlela amgcine ngayo ekhuselekile kuyo yonke le minyaka kwaye enethemba lokufikelela kwinyaniso kodwa ukuba isiphelo sisondele. Lo mbono ulusizi ngendlela emangalisayo kuba uAlex ngekhe kwisigidi seminyaka adubule uthando lobomi bakhe, kodwa ukuwangawangisa kwakhe umpu malunga nokungaqiniseki kukhokelela ekufeni kwakhe. I-Skinner, esandula ukuphuma esibhedlele kunye nemidlalo enenzondo efanelekileyo yendlovu, idubula inkosana yethu ebabazekayo engalweni. UAlex uzama ukufikelela nompu ngengalo yakhe yokufakelwa kodwa akakwazi ukuyibamba. Emva koko wenza ilinge lokujonga ubomi bakhe kodwa uWalter, emjongela phantsi ngesigqibo esibandayo se… Isiphelo (bendixoka), simdubule phakathi kwamehlo. Ubusuku obuhle, inkosana entle enedemon. Ngamana iindiza zabazingeli abaziindwendwe abanokucula ekuphumleni kwakho.
* amehlo odabs anethishu *
i-digve diggs calvin kunye nokuzonwabisa
U-Mulder ukwazile ukubaleka, ngaphandle kweyona migudu mihle ka-Crane no-Knowle. I-Doggett iyazibamba ngelixa u-Mulder efumana i-chopper eNorth Carolina. Lonke eli xesha, uReyes noScully bebelungiselela kwangaphambili ukuzalwa. UDoggett wabathumela kwindawo awazalelwa kuyo. Kuthe cwaka kwaye kubekelwe bucala, kodwa kunjalo usherifu wasekhaya oguqukayo uyabonakala kwaye angqineke engathembekanga. UReyes ubala ukukhanya okubhabha esibhakabhakeni kwaye uthi unemvakalelo emibi ngayo yonke into. NjengoHan Solo ezibuza ukuba ingaba u-eff ungene phi, okanye uPatty Tolan ubhengeza into engekho, igumbi eligcwele amaphupha amabi, uReyes uyazi xa kukho into ephakamileyo. Xa uScully esiya kubeleka, ufumanisa ukuba isherifu ikwasisityalo esingaqhelekanga. Ndiyathetha, ngokucacileyo. UBilly ufika enezithuthi zabanye kwaye uDana olihlwempu unesidima esinye kubabhali njengoko ehambisa usana lwakhe kunye nabaphulaphuli abagcweleyo be-loopers ekubonakala ukuba bazimisele ukuluhlutha kuye kwangoko xa luphefumla. Ngesizathu esithile nangona kunjalo, bonke bayemka ngaphandle kokubangela ingxwabangxwaba emva kokuba umntwana ezelwe. I-Mulder ibonisa ukuba iyabafumana bonke. Wayengazi nokuba uScully wayefanele ukuba uphi, walandela ukukhanya esibhakabhakeni. Efanayo uReyes wabona ngaphambili. Iphantse yemaBible, ewe.
Buyela eDC, Reyes kunye noDoggett isandla kwingxelo yetyala. U-Kersh ucaphukile-akanalo nolunye uluvo lweemvakalelo- kodwa imibhobho phantsi xa uDoggett emxelela ukuba uphantsi kophando lwentlanganiso ethile eyimfihlo noKnowle noCran. Bacingelwa ukuba baswelekile emva kwesigameko e-Bureau kodwa ngoku balahlekile. UDoggett utsala ucango emva kwakhe kwaye ngandlel 'ithile uyala ukuwisa imic.
U-Mulder, ekufuneka ndiqaphele ukuba akakasebenzi, undwendwela uScully ekhaya. Abaphumi-mkhosi abaLodwa bawisa izipho zomncinci. U-Scully ubonisa uMulder ithole, inkwenkwana egama linguWilliam. Uthi wamthiya ngegama likatata kaMulder (kunye notata wakhe, kunye nomntakwabo, kodwa nantoni na). Baxoxa ngokukhulelwa, noDana esithi woyika ukuba kutheni kwaye kutheni kwaye nentsingiselo yako konke. U-Mulder uthi banokwesaba ukuba kuthetha ntoni, kodwa bahlala beyazi inyani. LE KID YABO NGOKUPHELELEYO. Yiyo kuphela inkcazo esengqiqweni, kwaye andikhathali nokuba bafuna ukuyichaza njani. Yenza uvavanyo lwakho olungaqhelekanga lwe-esile, UWilliam uyi-X-FILES CUB kwaye ayisiyo nje ityhubhu yeScully. Amaqhawe ethu ayamanga kwaye kube kanye yonke into xa kuphela ixesha lonyaka ifrigging emangalisayo.
Wowu! Uxolo. Kwakukuninzi ekufuneka sikugubungele ngeli xesha lonyaka. Ezo zezona ziganeko ziphambili, kwaye ziyasivumela ukuba sihlele kakuhle kuphononongo lwabalinganiswa. Bethu, kodwa bafikile kude.
UDana Scully, MD, ukukhanya kobomi bethu ngokudibeneyo. Eli xesha lalingelulanga kuye kodwa uGillian Anderson uyamthwala ngesidima nangobabalo. Ngenxa yokuba oko kunokwenzeka xa ababhali befuna ukuba boyike malunga nomlinganiswa wakho olangazelela kakhulu-ukukhulelwa. Scully zininzi izinto ngeli xesha lonyaka. Womelele, ubuthathaka, ubuthathaka, unqwenela, uqhutywa, ngumntu. Unzulu kakhulu umntu. Utshintsha abe yi-Mulder ngokukhawuleza, kwaye bekuya kuba yinto engathandekiyo ukubukela ukuba bekungacacanga kabuhlungu ukuba kutheni esenza njalo. Njengoko iziqendu ziqhubeka-Umonde uphawula ukuqala kwakhe ukungena kwihlabathi leemfundiso ezingekho mthethweni, no-Doggett egcwalisa izihlangu zakhe zokuthandabuza-kwaye uMulder uhlala engekho, iinzame zakhe zokugcwalisa ukungabikho kwakhe ziyabonakala kabuhlungu. Unokuthi ngumntwana wase-Mulder (fnar) ngaphakathi ekuqhubeni kwakhe, kodwa ndicinga ukuba uScully uza kuxhomekeka kwiqabane lakhe kakhulu, kwaye ade azichaze ngomsebenzi abawabelanayo, ukuba ukunyamalala kwakhe kuyisuse ngokupheleleyo ingqondo yakhe. Kakhulu kangangokuba uziva isidingo sokummela xa angekhoyo, ukuze akwazi ukubambelela kwisikhumbuzo sokuba ungubani.
Oku kuhanjiswa ngamaxesha ahlukeneyo kulo lonke ixesha lonyaka. U-Scully unemibono ephindaphindwayo ka-Mulder evavanywa ngabaphambukeli. Ngaphakathi, ufumana ubhetyebhetye ngokugqithisileyo xa abantu beqala ukubuza igama likaMulder. UDoggett uthatha isigqibo esingacetyiswanga sokubuza ukuthembana phakathi kwabo, esithi uMulder wayezityand 'igila kwabanye abantu basetyhini kwaye wayecinga ukuba uzokujongela phantsi umsebenzi wakhe. (Le ndlela inesini kakhulu kwaye, ndiyacinga, ukungafani noDoggett njengoko siza kumqonda. Phantse ngokungathi udlulisa amanqaku avela kubaphathi bakhe abangahambi kakuhle, akunjalo? ithi mayimunce. Xa bedibana kamva kwigumbi likaMulder, besiya apho bodwa beyokukhangela into ethile, uSchully ubuzwa ukuba uyakholelwa na kwiindawo ezingaphaya komhlaba. Uphendula ngelithi uzibonile izinto, njengesazinzulu, angenako ukuzichaza, kwaye akukho mntu uphilileyo engqondweni angawagxotha la mava ngaphandle kwengcaciso esengqiqweni. Olo yayilutshintsho olukhulu kuye kunye nento ayibonayo. Ekunyamezeleni, ujikeleza ngokukhuselekileyo ejikeleze idesika kaMulder emva kokuba uDoggett esiya kuhlala. Utyala igama lakhe ngokuqinileyo edesikeni aze kamva alibeke edoweni yokugcina kakuhle. Konke kuza entlokweni ebandayo eBadlaa, xa uScully etyhola umntu ozenza inkwenkwana. Kamva uthi yile nto uMulder ebeya kuyenza, kwaye uyavuma ukuba uzama ukumbamba. Uthi u-Mulder wenza ngaphandle komgwebo kunye nokubandlulula kwaye ngengqondo evulekileyo andikwazi nje, phantse ndizigxeke ngokungafani naye.
Ngomzuzu omnandi ngokukodwa kule ayenzeki, amanyathelo aqaqambileyo ngaphandle kunye no-Skinner kwaye ujonge phezulu ezinkwenkwezini. Ubonakalisa olo tshintshiselwano luhle phakathi kwakhe noMulder isizini ephelileyo , apho wathetha ngokukhanya kweenkwenkwezi ukuba ngamawaka ezigidi eminyaka ubudala ngexesha lokufikelela kwazo. Uthi, ayiyi kufa, oko kukhanya. Mhlawumbi kuphela kwento engasoze yenzeke. (Ukuhlekisa kwi-Katolika-kodwa ndiyaphuma.) [Mulder] uthe kulapho kuhlala khona imiphefumlo. Ndiyathemba ukuba unyanisile. Uyephule kwaye ajonge kuWalter ukuze amthuthuzele. Iphawula ukuphela kwe-Scully's arc ngeli xesha lonyaka, njengoko eveza uloyiko lwangaphakathi kunye nokungaqiniseki ngendlela esingayiboniyo ngaphambili. Uhleli kakhulu kwiimvakalelo zakhe kwaye uyathandabuza nanini na ukuvumela nabani na ukuba abukele ukujika kwakhe ku-Skinner ukuze aqiniseke, elinye lamaxesha awenzayo ngeli xesha lonyaka, uxelela ngokwenene. Emva kwesizini ephelileyo, ngakumbi ukukhula kwezinto zonke, apho waqala khona ukwamkela iimvakalelo zakhe zikaMulder kunye nokuthembela kwilishwa (ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile), ubulolo bakhe bunokubonakala. Ngaphandle kwenkxaso kaSkinner (kunye noDoggett), ubeke ithemba lakhe kwinto engenakuphinda ibuye, kwaye kwelinye lawona maxesha aneemvakalelo kwaye enzima ebomini bakhe.
Ukumemeza okuyimfuneko ngeli xesha kuWalter Sergei Skinner, indoda eqaqambileyo kunye nokumkani wentliziyo yam. Ubuyile Scully kulo lonke ixesha lonyaka. Uyamgubungela xa efuna ixesha lobuqu, emke kwimibuzo yokuphanda, kwaye emqinisekisa nanini na eyifuna. Uliqhawe kwaye ufanelwe ukwamkelwa, ngaphandle kwesikrini esincinci. Andikwazi ukungamthandi ngokudubula uKrycek, kuba uKrycek wayesebenzisa loo nano-virus ingaqhelekanga ukumngcungcuthekisa kwaye ngokubanzi eyinkunkuma. Njengoko besitsho EChicago , wayenayo ukuza kwayo.
UJohn fuckin 'Doggett. Ndikuthanda njani? Makhe ndibale iindlela. Phakathi kwezinye izinto, le ndoda:
ezemidlalo eyona NYC ye-NYC i-twang eyakha yakho
Uchitha impelaveki yonke phambi kweveki yakhe yokuqala kwiX-Files efunda zonke iifayile ngokudibeneyo
uthetha izinto ezinje ngokundizobela umfanekiso, ngoku yibeke kwisakhelo xa usebenzisa ithiyori yenyani engaphezulu kwinyani
ibhekisa kuScully njengomphathi
ngaphandle kwayo yonke i-odolo ngokuchaseneyo, inyanzelisa ukuwela yonke t kunye nokuchaphaza zonke i
Imibuzo ngokuthe ngqo kwi-Kersh enomthunzi kakhulu kwiintsuku zokuqeshwa kwakhe
umamela kwaye athembe isigwebo sikaScully, ngelixa ngentlonipho enikezela ngezimvo eziphikisayo
U-200% uzibophelele enyanisweni, phantse ngokungathandabuzekiyo enikwe ubutshaba bakhe kwimbono yamandla amakhulu / amandla emveli
kwisiqwenga esihle sokuphuhliswa komlinganiswa, wathi ubutshaba buvela ngokuyinxenye ekuphulukaneni nonyana wakhe nakwimfuno yakhe yokuziva ukuba wenze konke okusemandleni ukumsindisa.
Yintoni mfo. Ndandimthanda kakhulu ngokukhawuleza kuba udlalwa nguRobert Patrick noRobert Patrick yibhombu, kodwa umlinganiswa uyakhazimla nje. Naxa enikwe okokuqala ii-X-Files kwaye ukuthandabuza kwakhe kuphakamile, akaze abe mfutshane ngobungcali nangembeko. U-Scully uyamlumkela ekuqaleni kodwa ukukhawuleza azibonakalise eyindoda elungileyo kwaye elilungisa kwaye nomcuphi ongalalanisiyo uwina umbulelo nentlonipho. Ungumoya omtsha womboniso-iphoyisa elidala elinikwe umsebenzi wokubamba kunye nomsebenzi wamapolisa, kodwa umntu uzimisele ukuthembela kwiziqu zabalingane bakhe ukuba iyakubafumana. Ininzi yale nto isungulwe kwangoko-ngaphakathi, woyikeka ukuva ukuba umntu angasihlola uScully (uyamkrokrela, kunjalo) kwaye uye ngqo eKersh ayokubuza ukuba kuqhubeka ntoni. Uyamnceda woyise umzingeli onesisa kwaye ahlangule uGibson, kwaye amzisele ingxelo epheleleyo esesibhedlele ukuqinisekisa ukuba usesikhathini. Ude acele ukhuseleko olukhethekileyo lwamapolisa kuGibson, ephawula ukuba ngewayenze ntoni kwezi meko.
Ngokufanayo neearhente ezininzi kulo mboniso, iDoggett ithatha ixesha ukwamkela umbono wokubandakanyeka kwamanye amazwe kwiimeko zabo. Uzimisele ukufumana uMulder (okanye uMuhl-da, njengoko embiza njalo) kwi-terra firma. Nangona kunjalo, ekunyamezeleni, uyaphawula ukuba isisombululo kwiifayile ezininzi ze-X ziqala ngokutsiba. Ngu-Via Negativa, uye wasongelwa ngokwaneleyo kukungaqheleki kwamatyala abo ukuba azikhathaze ngokumthatha kwabo. Konke kubonakala ngathi kuza entlokweni yesipho, apho isidalwa esingaqhelekanga esikwaziyo ukufunxa izifo kwaye sinike abagulayo ubomi obutsha bumsindisa kwinxeba lokudutyulwa. UDoggett uzibona elele phantsi komhlaba kungekho ngcaciso inokwenzeka malunga nokuba usinde njani kwimbumbulu emathunjini.
Ndiyathanda ukuba afune uncedo lukaReyes kule Ayenzeki, evuma ubungcali bakhe ngalo mbandela ukuwo. Ndiyathanda ukuba akasokuze anyaniseke ku-Scully, ambukele umva kuyo yonke into ukusuka kwi-Roadrunners ukuya eMedusa kwaye abuze emva kwakhe kunye noJ Edgar omncinci xa efumanisa malunga nokukhulelwa. Kwaye ndiyathanda ukuba akaze alahlekelwe ngumbono wesabelo sakhe: ukufumana uMulder. KwiPer Manum, uScully uthi akazange amxelele ngokukhulelwa kwakhe kuba wayengafuni ukukhutshwa kwi-X-Files kwaye aphulukane nethuba lokufumana iqabane lakhe langaphambili. UDoggett uphantse wothuka kuba, utshilo, wathembisa ukumnceda amfumane kwaye yiyo kanye le nto bazakuyenza- kunye. Intliziyo yam yaqhekeka kubini emva koko ezine xa ndabona le nxalenye, ke.
Iyaqhubeka iphepha elilandelayo.
Amaphepha: 1 Mbini
Ngaphaya Kwemiphefumlo Emibini
Anna abeleke umntwana
yinto nje yokukhwela ityala
kubo kunye nemitya emibini yesikrini
I-vitamin ye-quartet yomtshato we-geek
Zonke izidalwa zazivuselela uphononongo